Shacab-weynaha INGIRIISKA Oo U Codeeyay Inay Ka Baxaan Dalalka Midowga Yurub+Daawo Sawirada | Berberatoday.com
Shacab-weynaha INGIRIISKA Oo U Codeeyay Inay Ka Baxaan Dalalka Midowga Yurub+Daawo Sawirada
London(Berberatoday.com)-Natiijada Aftidii shacabka Boqortooyada Ingiriisku ku kala Dooranayeeen in ay ka baxaan Ururka Midowga Yurub iyo in ay ka sii mid ahaadaan, ayaa waxay natiijadeedii noqotay inay shacabka Waddankaas doorteen inay ka baxaan Midowga Yurub.
Dadweynaha Ingiriiska, ayaa waxay 51.8% u codeeyeen inay ka baxaan Midowga Yurub, halka 48.2% ay doorteen inay ka sii mid ahaadaan Midowga Yurub, waxaana Aftidan ku guuleystay qolyihii u ololeynayay inay UK ka baxdo Midowga Yurub.
Natiijadan ayaa waxay saameyn ku yeelatay Suuqyada lacagaha lagu kala sarrifto ee caalamka, iyadoo lacagta UK ay hoos u dhacday Maanta oo keliya 10%, marka loo eego sarifka Doollarka, taasoo lagu sheegay qiimo-dhacii ugu weynaa ee ku dhaca tan iyo sannadkii 1985-kii.
Hoos u dhaca sarifka lacagaha Adduunka ayaa loo aanaynayaa Natiijada ka soo baxday Aftida Shacabka Ingiriiska ee Khamiistii Shalay ka dhacday Waddankaas, iyadoo sidoo kalena uu hoos u dhac gaadhaya 3% uu ku yimid sarifka lacagta Midowga Yurub ee EURO, marka loo eego sarifka Dollarka.
Markii Natiijada Aftida Ingiriiska la shaaciyay, ayaa waxaa Hadlay Hoggaamiyaha Xisbiga Madax-banaanida UK, Mr.Nigel Farage oo ka mid ahaa xubnihii sida weyn ugu ololeynayay in Britain ay ka baxdo Midowga Yurub, waxaanu sheegay in 23-kii Juun ay noqotay maalin Taariikhi u ah Britain.
Ra’iisul Wasaaraha Dalka Britain, David Cameron, ayaa Isgauna ku dhawaaqay Maanta in uu is-casilayo Bisha Oktoobar ee sannadkan lagu jiro 2016-ka, kaddib markii shacabka UK ay u codeeyeen inay ka baxaan Midowga Yurub oo uu isaguna doonayey inay ka sii mid ahaadaan.
“Go’aanka shacabka Britain ay ku gaadheen inay ka baxaan Britain waan ixtiraamayaa, waana go’aan ay iyagu gaadheen, balse waxaan go’aansaday inaan xilka iska casilo bisha Oktoobar ee sannadkaan,” ayuu yidhi, David Cameroon oo uu Maanta ka soo saaray Xafiiskiisa London, markii lagu dhawaaqay Natiijada.
UK ayaa waxay noqonaysaa waddankii ugu horreeyay oo ka baxa Midowga Yurub.